Yakanakisa Kushambadzira Blog
Iyo Yakanyanya Kushambadzira Blog Yakagara!
Svondo, May 9, 2010 Svondo, May 9, 2010 Douglas Karr
Kune mamwe makuru ekushambadzira mablog kunze uko, asi ini ndoda kutenda kuti izvo zvatakaisa pamwechete ndizvo zvakanakisa zvinyorwa zvakambenge zviri panenge pese musoro wenyaya. Tiri vakanaka here? Hazvigoneke kupokana, handizvo here? Chokwadi - tinogona kushandisa nhamba yevanonyoresa, vateveri, mafeni uye vanofarira kuyedza kuona ... asi icho hachisi chiratidzo che yakanakisisa, ndicho chiratidzo che chandinodisisa or yakakurumbira.
Kutaura kuti kambani yako, chigadzirwa chako kana sevhisi yako ndiyo yakanyanya kunaka inogona kunge iri imwe yematanho makuru ekusimudzira akambove nezvikonzero zvishoma:
Vanhu vanozvitenda. Vanhu vachakupa iko kubatsirwa kwekukahadzika uye kuda chido kutenda zvauri kutaura ichokwadi. Vanyori vezvematongerwo enyika vakadzidza izvi kare kare… taura izvo vavhoti vanoda kunzwa, uye woita chero chaunoda kana iwe uchinge waita kuhofisi.
Chiporofita chinozvizadzisa. Kutaura kuti ndiwe wakanakisa kunozoitika kana uchizvitenda. Iwe unotanga kuzvibata pachako kune yepamusoro mwero uye gara uchiita chokwadi chekuti unomira pakati pevanokwikwidza.
Inoisa makwikwi pazvidziviriro. Nepo iwe uchiramba uchikohwa iwo mabhenefiti ekuve akanakisa, makwikwi ako akasara achiedza kuratidza kuti ivo havasi vechipiri nzvimbo.
Ndakabvunzwa svondo rino kana iri kana raive zano rekunyengera. Ini handisi kukurudzira hunyengeri uye ndinozvidza zvematongerwo enyika senguva dzose. Pane kudaro, ndiri kukurudzira vanhu nemakambani kuti vazvishambadze sevakanakisa - uye nekuendesa pane izvo zvinotarisirwa.
Muenzaniso wakanaka weiyi iMake Mari Online boka revatengesi vepamhepo. Ivo havangosimudzire chete yavo saiti uye zviwanikwa sezvakanakisa, ivo zvakare vanoisa mari zvakanyanya mukugadzira iyo persona yekuti ivo ndivo vanhu vakabudirira kwazvo online. (Ini pachangu, ndinofunga kushambadza kwavo kuri nani pane mhedzisiro yekudyara masevhisi avo ... asi ndiwo maonero angu chete.)
Chii chiri kukutadzisa kushandisa nzira iyi? Tsanangura zvaunonyanya kugona uye tanga kuzvisimudzira nhasi.
May 20, 2010 pa 8: 15 PM
Ndinodada kuve chikamu cheakanakisa Kushambadzira Tech Blog!